Cajal: Talooyin Ku Saabsan Sida Loo Heliyo Dhimista Python Dead Agent From Your Windows OS
Python waa fayruska kombiyuutarka ee dilaaga ah kaas oo lagu rakibo kombiyuutar dhameystiran oo aan lahaynmilkiilaha ruqsadda. Worm.Python - asgard nominated bank account form.Agent waxaa ka mid ah qoyska halis ah ee qoyska Trojan. Wakiilka Python waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay fayraska ugu dhimashada badanmaadaama ay u ogolaanayso in kale oo khayaano ah si aad u hesho kombiyuutarka ka dib markii aad si buuxda gacanta ugu haysay Fayruska Python wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo waxqabadka guudee kombuyuutarkaaga.
Fayruska Worm.Python.Agent wuxuu soo aruuriyaa xogtaada qiimaha leh oo wax ka beddeleysaHackers ayaa si sahal ah u kantarooli kumbuyuutarkaaga oo dhan si aan qaraashaad lahayn. Tijaabinta internetka iyada oo aan lahayn fayrus ka hortag firfircoonwaa mid khatar badan. Isticmaalayaasha kombiyuutarada ee u muuqda in ay soo dejisan karaan barnaamijka bilaashka ah ayaa u nugul inay ku xiraan fayraska. Wakiil Python waa dilaafayruska oo sidoo kale wax ka beddelaya goobaha adoo eegaya adiga oo bedelaya qaabka asalka ah. Ka dib markaad xakamayso barta internetka, fayraska Pythonwuxuu casriyeeyaa isticmaalaha kumbuyuutarka si uu bogga xaasidnimo u noqdo.
Julia Vashneva, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Sare ,waxay ku faahfaahineysaa sababaha loo yaqaan 'Python Agent' iyo sida looga takhaluso.
Ku-rakibidda fayruska Python ee kombiyuutarkaaga wuxuu kuu soo bandhigayaa adiga khayaanada xaasidnimo leh oo karti lehhelitaanka fursadahaaga internetka, xisaabta xisaabta, iyo macluumaadka bangiga internetka. Saameynta halista ee fayraskaan aad ayuu u sarreeyaa.Worm.Python.Agent waxay ku kici karaan kombuyuutarka iyadoo loo marayo siyaabahan soo socda:
Soo iibsiga software-yada bilaashka ah ee suuqa
Ku xiridda kombuyuutarkaaga USB-ga iyo warbaahinta kale ee kaydinta
Riixaya xayawaanka xun ee riixaya marka la fuulayo
Sida looga hortago PC-gaaga inaad kaadid kuugu jirtid Duufaan..Fayraska Python.Agent
Iska ilaali in aad riixdid pop-ups marka aad surfing.
Mar kasta isticmaal habka rakibidda habka rakibida marka aad ku rakibtid software-ka la soo dejiyey
Ku-rakibidda fayraska anti-virus-ka ee aad PC-gaaga
Ka-saarka wakiilka Python PC-ga adiga oo isticmaalaya habka gacanta
Worm.Python.Agent ayaa laga saari karaa kombiyuutarka adigoo bedelaya nidaamkagoobaha faylka si ay u gaaraan faylasha qarsoodi ah iyo diiwaanka diiwaanka PC-ga. Riix badhanka 'Organize' oo guji faylka leh diiwaanka qarsoonfaylasha. Riix 'OK' si aad u tirtirto faylasha diiwaanka iyo codsiga isbeddelka.
Ka-saarista fayruska 'Python Agent' ee ka yimid Windows OS
Uma baahnid inaad argagaxto haddii aad ogaato kombiyuutarkaagu inuu ku dhaco Worm.Python.Agentfayraska. Guji 'Start Menu' badhan oo dooro dhammaan barnaamijyada lagu rakibay kombuyutarkaaga. Uninstall dhammaan barnaamijyada xaasidnimo sida Pythonfayruska lagu rakibay kombiyuutarka adiga oo riixaya 'Uninstall or change program' button kaas oo ku hoos jira Control Panel.
Uninstall virus Worm.Python.Agent ka browser kaaga
Si aad u tirtirto barnaamijyada xaasidnimada leh ee la xakameynayo taariikhdaada daalacashada, tagBrowser-ka Chrome oo dooro 'Menu'. Tag jadwalka horumarsan oo guji fidinta. Riix '' Trash icon '' hoosta ku yaalriix 'Dooro'. Isticmaalayaasha kombiyuutarka oo isticmaalaya Internet Explorer, dooro 'Maaraynta ad-on' option oo riix badhanka 'Tools'. Xulo'Toolbars and Extensions' oo raadi fayraska Python. Click 'Ka saar' si si joogto ah looga saaro virus ka computer.
Worm.Python.Agent waa fayras dilaaga ah oo gacanta ku haya maaraynta kumbuyuutarkaagaiyo raadinta taariikhda. Ka dib markii lagu rakibo kombuyuutarkaaga, Fayraska Python wuxuu ururiyaa xogtaada ku habboon oo aad la wadaagto macluumaadkaKacaanka xaasidnimada ah ee hela faa'iidadaada. Si aad uga hortagto fayraskaan saameyn ku yeelashada PC-gaaga, had iyo jeer soo cusbooneysii fayraskaaga anti-virus iyo jadwalkabaaritaan habaysan si loo ogaado oo looga hortago barnaamij kasta oo xaasidnimo ah oo laga qaado infekshinkaaga.